🥇 ▷ BlackBerry KEY2: Jirdilka Zack xitaa xitaa kama xishoodo isaga (fiidiyow) ✅
BlackBerry KEY2: Jirdilka Zack xitaa xitaa kama xishoodo isaga (fiidiyow)
BlackBerry KEY2 ayaa ugu dambeyntii diyaar u ah inay soo caga dhigato suuqa, oo ay ku jiraan Talyaaniga, soo jiidashada dareenka dadweynaha iyo xirfadleyda, sida farac kasta oo ka mid ah astaanta caanka ah ee Canadian-ka oo mudan. Kuwaas ka mid ah ma seegi karin Zack, kanaalka YouTube JerryRigEwalwalba, ka walaacsan inaad tijaabiso qofka guuleystaha u ah KEYone yaa qalad tijaabadeeda adkaysiga, kaliya in lagu soo rogo dib u eegis lagu sameeyo qalabka muhiimka ah ee BlackBerry lafteeda.
Qaybta imtixaanka hadda si fiican ayaa loo yaqaan: waxaan ku bilaabaynaa imtixaanka iska caabbinta xoqid ee bandhigga, ku gudbay midabo duulaya in kasta oo BlackBerry uu doortay quraarad Gorilla Glass 3. Zack ayaa markaa dib u fiirinaya, oo leh mindi afkiisa fiiqan, oo ka kooban dhammaan qalabka, kana bilaabaya erayga muuqaalka jirka, oo furayaashooda laga dhex dhisay balaastig ahsidaa darteed xoqida, laakiin aamin ah xirmay jirka. Rabbiga ammaana akhristaha faraha, kaas oo aan si fudud loo xoqin oo u sii shaqeynaya inkasta oo ay jiraan culeysyo.
AKHRISO: BlackBerry KEYone oo ku kacaya € 399
Xariiqda dhinaca iyo furayaasha waxaa lagu dhisay a bir adag, halka daboolka dambe waa caag fiican giraangiraha, kaas oo xoqan iyadoo la adeegsanayo mindida, laakiin aan la taaban karin furayaasha ugu caansan. Waxaa jira tijaabada dabka wuxuu muujiyaa iska caabinta caadiga ah ee darbiyada IPS, oo damiya pixelska haddii loo diro il kuleyl xoog leh, marka laga reebo inuu isla markiiba ka bogsado. Ugu dambeyntiina, the tijaabinta foorarsiga: halka KEYone uu ku fashilmay, sabab u ahaanta koollo la’aanta oo awoodi kari weyday inay soo bandhigto xiiqda haddii cadaadis xoog leh la saaro, KEY2 ayaa taa bedelkeeda ka badan adag, kana mid ah telefoonada casriga ah ee ugu fiican suuqa. A dhiirrigelin la’aan hadh lahayn loogu talagalay casriga casriga casriga ah.